HS:- Dalka Soomaaliya oo ay hogaamin doonaan wajiyo cusub min baarlamaan ilaa hogaanka sare.
Posted by admin on June 05 2012 15:45:01
HS:- Dalka Soomaaliya oo ay hogaamin doonaan wajiyo cusub min baarlamaan ilaa hogaanka sare,maxaadse kala socotaa madaxa hada jirta ee ay ku socoto baaritaan dhinaca dhaqaalaha ah oo xoogan?.Wararka maanta Jun/5/2012
HS:- Marka meel leyska dhigo nin jecleysi iyo siyaasadaha Soomaalida ee inta badan ku dhisan qabiil qabiilka hadane marka xaalada dhinaca wanaagsan laga eego Soomaaliya waxaa ka dhalanaya dowlad rasmi ah oo sida lagu soo waramayo dhaqaalahii ay xitaa ku shaqeyn laheyd 5ta sano ee soo socota meel u yaalaan inkastoo aysan dhaqaalaas gacanta Soomaalida ku dhici doonin oo ay maamuli doonaan shirkado iyo gudiyo inta meel laga saarayo malaayin dolar oo sida la tuhmayo ku maqan hogaanka kumeel gaarka ah ee hada jira.
Wararkii ugu danbeeyey ayaa sheegayo in raad raac badan oo ay sameeyeen quburo ay dowladaha bixiya dhaqaalaha Soomaaliya u wakiisheen baaritaankaas ayaa sheegayo in 5ta qofood ee ugu daran ee ay baaritaanka ku hayaan ay kala yahiin.
1- Madaxweyne Shiikh Shariif
2- Gudoomiyahii hore ee baarlamaanka Shariif Sakiin.
3- R/wasaarahii hore ee Soomaaliya Mohamed Cabdulaahi Farmaajo iyo qaar ka mid ah wasiiradii xukumadiisa.
4-R/wasaaraha hada talada haya C/wali Gaas.
5-Dhawr shirkadood oo ay Soomaali leeyahiin oo la tuhmayo in dhaqaalahaas la marsiiyey qaarkoodna hayaan. waa macquul in masuuliyiintaan arintaan baaritaanka ku socdo ay wax badan ka ogyahiin laakisne aysan waxbo ka qaban karin madaama lacagta ku maqan lagu qiyaasay 100 Million oo dolar oo ah lacag aan sahlaneyn laguna hormarin karay dalka hadiiay ku dhici laheyd hogaamiyaal muwaadiniin ah oo dalka iyo dadka Soomaaliyeed u naxaya.
Arintaan lagu lunsaday malaayiinta dolar ee loogu deeqay dadka Soomaaliyeed ayaa ugu danbeyn waxey dowlado badan ku dhiiragalisay in siyaasada Soomaaliya lagu dadaalo dowlada soo socota in baarlamaanka iyo hogaanka la wareegi doono talada dalka ay noqdaan wajiyo cusub, halka kuwii hore aan haba yaraatee wax siyaasad iyo wada shaqeyn ah loo heyn xitaa hadii iyagoo awood dhaqaalo isticmaalayo ay ku guuleystaan siyaasada dalka.
Arintaani waxey ugu danbeyn siyaasiyiin badan ku dhiiragalineysaa in halkii ay iyaga doorasho gali lahaayeen ay raadiyaan qof siyaasada ku cusub oo aan hore xil u soo qaban oo ay u ololeeyaan hadii kale dhaqaalo kasta oo ay isticmaalaan dowladii ay soo dhisaan beesha caalamka waxey dhegaha ugu fureysan doonaan sidii ay dowaladii uu hogaaminayey C/qaasim Salaad Hasan aduunyadu waqtiga ugu lumisay oo ay u taageeri waayeen 2000 ilaa 2004kii.
Sikastaba Soomaaliya waxaa ka soo muuqda ifafaalo wacan oo hadii hogaamiyo daacad ah dalka iyo dadka Soomaaliyeed loo helo wadanku uu noqon doono dal qeyrkiis la jaanqaada mustaqbalka dhaw.